आइपीएलमा कुन कप्तानको तलब कति? (सूचीसहित) – Everest Dainik – News from Nepal
आइपीएलमा कुन कप्तानको तलब कति? (सूचीसहित)
१. रोहित शर्माः रोहित शर्मा आइपीएलका सर्बाधिक सफल कप्तान हुन् । उनको कप्तानीमा मुम्बई इन्डियन्सले ४ पटक आइपीएलको उपाधि जितिसकेको छ । रोहित मुम्बई इन्डियन्सको कप्तान छैटौं संस्करणमा बनेका थिए । उनले आफूले टीमको नेतृत्व सम्हालेकै सिजनमा मुम्बईलाई आइपीएलको उपाधि दिलाएका थिए ।
रोहितको कप्तानीमा मुम्बईले हालसम्म १११ म्याच खेलिसकेको छ । जसमा मुम्बईले ६५ खेलमा जित हासिल गरेको छ । आइपीएल २०२० मा पनि मुम्बईको कप्तानी रोहितले र्न गर्दै छन् । उनलाई आसन्न आइपीएलमा मुम्बईले १५ करोड भारु ‘स्यालरी’ दिएको छ ।
२. स्टिभ स्मिथः अष्ट्रेलिया क्रिकेट टीमका स्टार क्रिकेटर स्टिभ स्मिथलाई आइपीएलमा पहिलो पटक रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोर (आरसीबी)ले अनुबन्ध गरेको थियो । उनको आइपीएल करियर २०१० मा आरसीबीबाट भएको हो । अहिलेसम्म स्मिथले ४ टीमबाट आइपीएल खेलिसकेका छन् । उनी आइपीएल २०२० मा राजस्थान रोयल्सबाट कप्तानको रुपमा खेल्दै छन् । कप्तान स्मिथलाई राजस्थानले १२ करोड भारु ‘तलब’ दिएको छ ।
३. महेन्द्रसिंह धोनीः धोनीको कप्तानीमा चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके)ले तीन पटक आइपीएल उपाधि जितिसकेको छ । आइपीएलको १० सिजनमा सीएसकेले १ सय ६५ म्याचमा १०० खेल जितेको छ । आइपीएल २०२० का लागि सीएसकेबाट धोनीले १५ करोड भारु तलब पाएका छन् ।
४. विराट कोहलीः विराट अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सफल कप्तानका रुपमा चिनिन्छन् । तर, आइपीएलमा भने उनी सफल हुन सकेका छैनन । धेरै पटक टीम फाइनलमा पुग्दा पनि आरसीबीले उपाधि हात पार्न सकेको छैन् ।
आइपीएलमा रोयल च्यालेन्जर्स बैंग्लोर (आरसीबी) को कप्तान पदको जिम्मेवारी विराटले २०१३ बाट पाएका थिए । उपाधि दिलाउन नसके पनि विराट आइपीएलमा सर्बाधिक तलब पाउने कप्तान हुन् । आइपीएल २०२० का लागि उनलाई आरसीबीले १७ करोड भारु तलब दिएको छ ।
५. केन विलियम्सनः अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा न्यूजिल्याण्ड टीमको नेतृत्व गर्ने केन विलियम्सनलाई सनराइजर्स हैदरावादले २०१५ को सिजनमा टीममा अनुबन्ध गरेको थियो । तर, उक्त सिजनमा उनले खेल्ने मौका पाएनन् । विलियम्सनलाई हैदरावादले २०१८ मा डेविड वार्नरको अनुपस्थितिममा कप्तानको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
आइपीएलमा पहिलो पटक कप्तानको जिम्मेवारी पाएका केनले हैदरावादलाई फाइनलसम्म पुर्याएका थिए । तर, फाइनलमा हैदरावाद चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके)सँग पराजित भएको थियो । आइपीएल २०२० मा हैदरावादले विलियम्सनलाई ३ करोड भारु ‘स्यालरी’ दिएको छ ।
६. दिनेश कार्तिकः भारतीय टीमका विकेटकीपर–ब्याट्सम्यान दिनेश कार्तिकले हालसम्म आइपीएलमा ६ टीमबाट खेलिसकेका छन् । उनको आइपीएल करियर दिल्ली डेयरडेविल्सबाट भएको थियो । कार्तिकलाई कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ले २०१८ को सिजनमा टीममा अनुबन्ध गरेको थियो । र, उनलाई त्यही सिजनमा केकेआरले कप्तानको जिम्मेवारी पनि दिएको थियो ।
उक्त सिजनमा केकेआर सेमिफाइनलसम्म पुग्न सकेको थियो । मार्च २९ देखि सुरु हुने आइपीएल १३ औँ सिजनका लागि केकेआरले कार्तिकलाई ७ करोड ४ लाख भारु तलब दिएको छ ।
७. श्रेयस अय्यरः श्रेयस आइपीएल इतिहासका सबैभन्दा युवा कप्तान हुन् । २०१८ मा दिल्ली क्यापिटल्सले गौतम गम्भीरलाई हटाएर अय्यरलाई कप्तान बनाएको थियो । कप्तानको रुपमा पहिलो म्याचमै अय्यरले कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) विरुद्ध ४० बलमा ९३ रनको विस्फोटक पारी खेलेका थिए ।
दिल्ली गत संस्करणमा ७ वर्षपछि सेमिफाइनलमा स्थान बनाउन सफल भएको थियो । आसन्न आइपीएलका लागि दिल्लीले कप्तान अय्यरलाई ७ करोड भारु ‘स्यालरी’ दिएको छ ।
८. लोकेश राहुलः आइपीएलको गत संस्करणमा किंग्स इलावेन पन्जावका विकेटकीपर–ब्याट्सम्यान लोकेश राहुलले शानदार प्रदर्शन गरे । उनले गत सिजनमा १४ म्याचमा ५३.९० को औसतमा ५ सय ९३ रन बनाएका थिए । जसमा राहुलको ६ अर्धशतक सामेल थियो ।
गत संस्करणमा शानदार ब्याटिङ गरेका तिनै राहुललाई यो पटक पन्जावले टीमको कप्तान बनाएको छ । उनलाई ९ करोड भारु दिएर पन्जावले आइपीएल २०२० का लागि टीमको कप्तान बनाएको हो । –एजेन्सी
ट्याग्स: आइपीएल, तलब